Real Sociedad Oo Isku Dayday Inay Arsenal Ka Dulqaado Xiddiga Ay La Heshiiyeen – Garsoore Sports
Real Sociedad Oo…
Kooxda Real Sociedad ayaa ku fashilantay isku day daqiiqadii ugu dambeysay ah oo ay ku afduubaneysay daafaca ay Arsenal heshiiska la gaartay ee kooxda Benfica Nuno Tavares.
Gunners ayaa qarka u saaran inay dhammeystirto heshiiska Tavares oo ay kula soo saxiixaneyso adduun lacageed gaaraya 7 milyan ginni, iyadoo la filayo in heshiiska la dhammeystiro maalmaha soo socda.
Si kastaba ha ahaatee, kooxda LaLiga ee Sociedad ayaa la timid isku daygii ugu dambeeyay oo ay ku doonayso inay ku joojiso heshiiska Arsenal ay xiddigan kula wareegeeyso kaddib markii ay soo bandhigtay heshiis ka fiican midka ay Arsenal haatan kula heshiisay kooxda Benfica iyo xiddigan.
Sportsmail ayaa fahansan in wakiilka reer xiddigan ee Portugal ee Cesar Boaventura iyo hay’adda fadhigeedu yahay UK ee Sync Global ay door muhiim ah ka ciyaareen xaqiijinta kala iibsiga Tavares oo uu Arsenal ugu wareegayao halkii uu ku biiri lahaa Sociedad.
Inkastoo dalabkii Sociedad uu ka faa’ido badan yahay ka Arsenal, haddana Boaventura si dhakhso leh ayuu ugu dhaqaaqay si ay u hubiyo in heshiiska Tavares uu ugu biirayo Arsenal uu sii jiro.
21 jirkaan ayaa 20 kulan u saftay kooxda reer Portugal xilli ciyaareedkii hore, waxaana la rajeynayaa inuu kula tartamo daafac Kieran Tierney dambeedka-biddix, Tierney ayaa dhowaan saxiixay heshiis cusub oo shanta sanno ah waxaana la muuqata in haatan Gunners ay si adag isaga xoojisay booskaas iyadoo macalin Arteta uu doonayo inuu xagaagan kooxdiisa ka xoojiyo boosas badan sida Kubbad-sameeye khadka dhexe ah, daafac dhexe, Daafac middig iyo weerar biddix.